निखिललाई आफ्नै प्रतिमा उपहार, के ‘राधे’ ले ल्याउँला त बहार ? « Mazzako Online
निखिललाई आफ्नै प्रतिमा उपहार, के ‘राधे’ ले ल्याउँला त बहार ?
नायक निखिल उप्रेतीले प्रतिमा उपहार पाएका छन्, त्यो पनि आफ्नै । बैशाख १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘राधे’ मा नायक उप्रेतीको अर्धकदको प्रतिमा बनाइएको छ । सोही प्रतिमा बिहिबार आयोजित प्रेसमिटमा चित्रकार नविन सुवेदीले नायक उप्रेतीलाई उपहार स्वरुप प्रदान गरे ।
राधे अर्थात् नायक निखिल उप्रेतीले उक्त प्रतिमालाई सम्हालेर राख्ने बताए । द्धन्द्ध कालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको कथामा निर्माण भएको फिल्म ‘राधे’ मा निखिलसँगै नायिका प्रियंका कार्की, अशिष्मा नकर्मी, कलाकार प्रमोद अग्रहरी र शिशिर भण्डारीको मुख्य भूमिका रहेको छ । जगदिश्वर थापाको निर्देशन रहेको फिल्मलाई सुशिल पोखरेलले निर्माण गरेका हुन् । अर्को फिल्म सुटिङका कारण अशिष्मा उपस्थित थिइनन् ।
प्रेमसमिटमा नायिका प्रियंका कार्कीले आफैं पनि ‘राधे’ को प्रतिक्षामा रहेको बताइन् भने निर्देशक र निर्माताले दर्शकलाई मन पर्ने फिल्म बनाएको बताए । ‘निर्भय’ पछि निखिल अभिनित फिल्म ‘राधे’ प्रदर्शनमा आउन लागेको हो । के ‘राध’ ले ल्याउला त बहार ?